Hevitra MPANOHARIANA | Ankapobeny | 19
Nenina fa tsy tany Ivato
2011-02-21 @ 09:59 in Ankapobeny
Lasa ihany ny 19 febroary 2011 na ny andro faha-50 tamin'ity taona 2011 ity. Andro fikasana hodian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana, na fitadiavam-panakorontanana farany, hoy ny hafa satria efa manakaiky ny fankatoavana iraisampirenena, saingy nosakanana tamin'ny fomba rehetra izany fikasana izany mba tsy ho tontosa.
Maro, raha ny hita tamin'ny sary, ny olona tonga teny Ivato no vonon-kitsena. Maro ireo avy eto Antananarivo, tsy vitsy ny avy any amin'ny faritra na faritany izay an-jatony kilaometatra niala avy any amin'ny misy azy any no namonjy an'Ivato niaritory sy nanao lava-alina, ary nisy aza ny niainga avy any ampitan-dranomasina avy tany amin'ny nosy rahavavy mihitsy no nidodododo hanamarika sy hiaina ilay fitsenana makotroka. Saingy tsy ny filoha Ravalomanana ihany no tsy nahadingana teny Ivato fa mba anisan'izany ihany koa ny tena izay azo lazaina fa monina 20km monja tsy lavitra ny seranana iraisampirenena Ivato. Ny fitantarana izany tsy fahatongavana teny izany indrindra no anoratana etoana.
Niaraha-niaina teto nandritra ny herinandro ny adim-pampitam-baovao teo amin'ny avy ao amin'ny fitondrana sy ny ankolafy hafa, izay avy amin'ny mpanohana an-dRavalomanana Marc indrindra indrindra. Ny avy amin'ny fitondrana dia nanesika hatrany fa tsy ho avy eto an-tanindrazana izany izy fa manao vono-vorona fotsiny. Nisy ny fitenenan'ny sasany hoe tongava raha lehilahy satria manko noheverina fa tsy ho sahy hody tokoa ny lehilahy. Narangaranga tetsy andanin'izany fa tsy fotoana tokony hahatongavany eto an-tanindrazana indray izao fa raha midrikina io olona io dia efa miandry azy ny fisamborana sy ny fonja. Niverimberina tamin'ny haino aman-jery maro samihafa fa rehefa natao ny fanadihadiana dia tsy ho avy eto an-tanindrazana izany Ravalomanana fa lainga aparitaka fotsiny izany hanakorontanana ny saim-bahoaka.
Nisy ihany koa ny fitenenana lazaina fa hiaraka amina mpikarama an'ady ny filoha rehefa ho tonga eto. Io teny mpikarama an'ady io hatrany no teny entina handrangitana ny foloalindahy ary efa nahomby tamin'ny fotoan'androny hampivadika azy tamin'ny filoha. Tonga amin'izay ny fanambarana fa fahavalo izay rehetra mampiditra mpikarama an'ady eto ary fahavalo ihany koa izay rehetra miara-mihosina (sy miray foto-kevitra) amin'izany olona mitondra mpikarama an'ady avy any ivelany izany. Izany hoe azo tifirina avy hatrany tsy misy alaharo alaharo izay rehetra tonga amin'ny fitsenana raha hita tokoa izany mpikarama an'ady izany. Marihina etoana fa io teny hoe "fahavalo" io no teny nampiasain'ny mpanjanatany frantsay nentiny nandripahana ny Menalamba tamin'ny 1895-1897 sy ireo nitolona tamin'ny 1947.
Maro isan-karazany ny fampihorohorona natao hampihemotra ny besinimaro toy ny fitenenana fa raha tonga moa izy dia hosamborina, raha tsy tonga kosa dia izay nilaza vaovao tsy marina rehetra milaza ny fahatongavany no hosamborina... izany hoe tsy maintsy hisy hatrany ny fisamborana... fa tsy nampihemotra ny mpanohana an-dRavalomanana sy ny mpiara-dia aminy tsy ho tonga teny an-toerana ireny fampisavorovoroana ny saim-bahoaka naverimberina ireny. Rehefa hitan'ny sasany fa handamoka ihany ny fanakanana ny mpanohana tsy ho tonga eny dia ny fanakanana ny olo-tsotra hafa liana hijery ny zava-misy indray no natao.
Nanomboka ny zoma alina izany toy ny famerimberenana an-tsoratra tao amin'ny televiziona VIVA fa misy andian'olona voakarama hanao fanakorontanana eny Ivato ka iangaviana ny olo-tsotra indrindra ny besinimaro tsy ho tonga eny amin'io Asabotsy io. Mandritra ny horonan-tsarimihetsika ary naharitra fotoana lava dia lava no namerimberenana izany filazana izany. Tamin'io zoma alina io ihany koa dia nambarana tompon'andraikitra filaminana iray fa tsy misy fiara fitaterana mahazo mizotra mankeny Ivato fa ny zotra mpankeny ihany no mahazo alalana ho amin'izany, izany hoe tsy azon'ny fiara hafa ny manao "spécial" mankeny Ivato, na dia fotoana manokana aza io, fa lazainy hosamborina mihitsy izay mbola minia mandika izany toe-javatra izany. Paika izany hahavitsy ny olona tonga eny ary hahasahirana ireo mbola mikiry ny hitsena hatrany ny filoha Ravalomanana na dia rarana sy ampitahorina aza. Hita tokoa fa sahirana ny olo-tsotra tsy manana fiara vao tafiditra tamin'ireny fiara ireny ary nisy aza ireo voatery nandeha an-tongotra lavidavitra mba hamonjy ny namana mpiara-mitolona. Tsy mba nanana izany fikirizana sy fitozoana izany kosa ny tena tamin'io andro io na dia ny hitopy maso ny zavamisy fotsiny aza na dia lazaina fa miandry ny tena ny asa aman-draharaha sy ny adidy aman'andraikitra samihafa.
Raha akapoka ho iray ireo toe-javatra nitranga rehetra ireo, nisy ny fanakanana avy amin'ny fitondrana tsy hahafahan'ny filoha Ravalomanana hiditra eto an-tanindrazana, izay azo lazaina ihany koa fa lalana iray tsy maintsy nataony, ary azo lazaina ihany koa fa manana ny antony ho azy izy ny nanaovany izany fihetsika izany ary ny navoitrany moa dia noho ny resaka fiarovana sy fandriampahalemana. Dia azo tarafina ihany koa fa misy antony hafa indray ny fanakanana ny "olona hitsena" amin'ny fomba rehetra tsy handingana ny seranana iraisampirenena Ivato. Somary mampihomehy ihany io toe-javatra iray io satria raha nahazo nijorojoro sy nipetrapetraka ao anatin'io faritra io ny mpitsena rehetra taloha dia voarara kosa izany tamin'ny andron'ny Asabotsy 19 feboary 2011. Toe-javatra tsy dia fahita firy satria nanjary nametraka indray ny fisian'olona mahazo miditra toerana azon'ny besinimaro ifamezivezena ary misy kosa olona sakanana tsy avela hanatontosa ny fitsenana olona ao anatin'izany faritra tsy tokony ho voarara hifamezivezena izany.
Raha jerena izany dia samy mahafantatra ny andaniny sy ny ankilany fa hafa mihitsy ny tanjona sy ny kendrena tamin'ity fihetsiketsehana tamin'ny endriny hafa ity. Noho izany tsy ny fahatongavana na tsy fahatongavan'ny filoha Ravalomanana no tena iompanana sy ifotoran'ny resaka sy ny tolona fa ny fampisehoana ny hamaroan'ny olona tonga teny amin'io toerana iray io. Na dia nampitain'ny haino aman-jery iray sy ny mpitarika ny ankolafy Ravalomanana aza fa tsy nanenenan'ny olona tonga teny velively na dia tsy tonga aza ny olona notsenaina dia sarotra ny handray ny fandresen-dahatra tahaka izany raha tsy ny tena mihitsy no niaina sy nahatsapa fanenenana tsy mba tonga tany amin'io toerana io. Tsy mba niaina loatra ilay fahasahiranana voatantara teo ny tena.
Tsy mba niaina ilay nandray fiara hatreo amin'ny Vatobe (na Ny Havana) mbola mitody mankeny amin'ny Vassacos Antanimena aloha vao mizotra mankeny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato, ny dikan'izany dia mbola nandoa saran-dalana mankany Antanimena aloha ny olona vao mandoa ny sarandalana mizotra ho any Ivato amin'izay. Tsikaritra ihany koa fa somary niova lalana kely ny maromaro tamin'ny fiara mpankeny ka nijanona teny amin'ny Horizon Ivato izay tsy mandalo eny amin'ny lalana mivily mankeny amin'ny seranam-piaramanidina fa voatery mandeha an-tongotra eo ho eo amin'ny iray kilaometatra eo indray vao mahazo ny lalam-pitsenana izay lala-mahazatra ny besinimaro tao ho ao.
Eo ankilan'izay ihany koa anefa dia tsy mba niainana ny ambiansy nifanaovan'ny mpanotrona rehetra tamin'io fotoana io. Izay ambiansy izay no tena banga tamiko (ankoatra ny tsy fakana sary izay ankafiziko ihany koa). Tsy niainana ilay miara-mihira hiram-pivavahana nifanaovana ankoatra ny hiram-pitiavan-tanindrazana mahazatra. Tsy mba niainana ilay fifankahitana amin'ny mitovy firehan-kevitra avy amin'ny faritra samihafa avy eto Madagasikara. Mety tsy azonao angamba izay lazaiko sy ny lanjany fa hevero fotsiny ho tahaka ny mijery ny lalao ankafizinao iray ianao (baolina fandaka ohatra na basket-ball) dia maro dia maro ny mpijery dia mety ho tsapanao izay lazaiko. Fa raha mbola tsy azonao ihany ny tiako hahatongavana dia akory atao fa mety ho samihafa mihitsy ny zava-manintona antsika amina fotoana iray. Dia izay indray aloha fa amin'ny manaraka manao misimisy.
Jentilisa, 20 janoary amin'ny 7 ora 45 minitra maraina.
wikileaks nandiso fanantenana ahy sy tsiambaratelo hozaraiko
2010-12-08 @ 11:50 in Ankapobeny
Asa ianareo raha toa ahy fa mba liana tamin'ny fandehan'ilay "fanafintohinana momba ny telegrama" [scandale des notes diplomatiques] ny tena hoe inona izao tsiambaratelo tazonina mafy izao sy ny zavatra ifampitan'ny masoivoho Amerikana mielipatrana manerantany amin'ny sekretariam-panjakana amerikana izao saingy diso fanantenana tanteraka aho rehefa nijery ny vohikalan'ny [fitaratr'i] wikileaks'. Mazava loatra fa niandry sy nikaroka izay resaka momba an'i Madagasikara nifampitana tao ny tena saingy tsy maharaka ny resaka rindrambaiko loatra ny tena fa tsy tsy mahita na inona na inona sady tsy mahalala akory hoe ahoana ny fitady ilay na ireo telegrama mifandraika amin'i Madagasikara izany? Dia niharihary teo ny havendranana amin'ny resaka solosaina... na izany aza dia misy ihany ny namana nahazo sombim-baovao ka namoaka azy io ary izy irery no fantatro hatreto amin'ny fampitam-baovaon'olo-tsotra nanana hozaraina amintsika mpamaky.
Dia mba namaky izay tao aho ka hitan'ny maro aho dia mbola nihomehin'ny fahadisoam-panantenako hatrany. Dia toa ny hitantsika amin'itony aterineto itony ihany no nivoaka sy hita tao fa tsy misy ilay zavatra tsy fantatsika mpamaky ka hanazava bebe kokoa ny zavanitranga teto amintsika hatramin'izay. Dia hoy aho hoe mety ho misy ihany angamba ny vaovao any fa noho ny tsy fahaizana dia tsy azo ireny sombim-baovao ireny fa izay nahazo azy kosa tsy hamoaka azy fa hanohintohina ny politikany na hita ihany ny mahaolona ny Amerikana fa toa mora fitahina amin'ny alalan'ny mpitsikilony ihany, ny mpitsikilony izay mety hisy Malagasy ka manana ny safidy politikany momba ny toe-draharaha eto Madagasikara. Dia hoy aho hoe mahatsapa zavatra aho ka tiako hamarinina amin'ny telegraman'izy ireo izany na mitombina na tsy mitombina dia izao manaraka izao:
«Mialoha 1 2 3 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 38 39 40 Manaraka»